यो हो पीएम मोदीको सम्भावित कैबिनेट, यिनीहरूको भाग्य चम्किने !  नेपाल भारत‍
यो हो पीएम मोदीको सम्भावित कैबिनेट, यिनीहरूको भाग्य चम्किने !
आज साँझ ७ बजे सपथ ग्रहण हुने
मुम्बई । 2019 को लोकसभा चुनावमा प्रचंड बहुमत पछि नरेंद्र मोदीले आज दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनेछन्। शपथ ग्रहणमा केवल केहि घण्टा बाँकी छ, तर प्रश्न यो छ कि यस समयमा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीको कैबिनेटमा कुन कुन नेताहरूले इन्ट्री पाउनेछन्।स्रोतका अनुसार, थुप्रै पुराना मन्त्रीहरू सहित केही नयाँ अनुहारहरू प्रधान मंत्री मोदीको क्याविनेटमा समावेश हुनेछन् ।रोचक कुरा त के छ भने बीजेपीले 303 सीटहरू सहित पूर्ण बहुमत भन्दा धेरै सीट जितेको छ। यसबाहेक, नरेंद्र मोदीको कैबिनेटमा सबै भाजपाका सहयोगी दलहरूलाई सहभागि गराइने छ। जसमा शिवसेना देखि जेडीएच र अपना दललाई पनि मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिइने छ ।
मोदी कैबिनेटमा हुने सम्भावनाका नामहरूमा यूपी, बिहार र गुजरातका प्रतिनिधीहरूको नाम विशेष प्राथमिकतामा छ । अर्थात यि तीनवटा राज्यबाट उच्चतम सेवकहरू क्याविनेटमा सामेल हुन सक्ने छन् । यसबाहेक, सरकारले पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पनि सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको छ । किनकी आगामी विधानसभा चुनावमा यसले ति राज्यहरूमा प्रभाव पार्ने विजेपीको ठम्याइ रहेको छ ।
आज प्रधानमन्त्री सँगै कैयौं दिग्दज नेताहरूले शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ । जसमा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पियुश गोयल, रवि शंकर प्रसाद, निर्मल सथरमान, धर्मेन्द्र प्रसाद, स्मृत ईरानी, प्रकाश जाडडेकर, नरेंद्र सिंह टमकर, मुख्तर अब्बास नकवी, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, राजभ्रमण सिंह राथौर र पश्चिम बंगाल को बैरकपुर सीट सूचीबाट अर्जुन सिंह को नाम शामिल छ।
बीजेपीको सहयोगी दलहरुबाट एलजेपी का अध्यक्ष रामविलास पासवान, अपना दल (एस) बाट अनुप्रिया पटेल, अकाली दल बाट हरसिमरत कौर र आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवाले ले पनि मंत्री पद को शपथ लिन सक्ने छन् ।
राजनाथ सिंहले फेरि एक पटक कैबिनेटमा स्थान पाउने सम्भावना छ। उनि भाजपाबाट दुई पटक राष्ट्रिय अध्यक्ष भएका थिए । यसबाहेक, उनी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि थिए। दोस्रो पटक लखनऊ संसदीय सीट जितेका उनले त्यस अधि गाजियाबादबाट सांसद भएका थिए ।
पयुश गोयलको मन्त्री पद लगभग निश्चित भैसकेको छ। यिनले नरेंद्र मोदीको पहिलो सरकारमा धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। मोदी सरकारको मोर्चाले पहिले नै यो स्पष्ट पारेका छन् कि अरुण जेटली क्याविनेटमा समावेश हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा, वित्त मंत्रालय अरूलाई दिन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा, पियुश गोयलको नाम पहिलो हो। वास्तवमा, रेलवे मन्त्री प्यूश गोयल, जसले अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्, यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्छन, किनभने गोयल पेशाले CA हुन र बीजेपी को कोषाध्यक्ष पनि ।
नरेंद्र मोदी सरकारमा नितिन गडकरी मंत्री बन्ने प्रायः निश्चित छ। गडकरी अघिल्लो सरकारमा सडक परिवहन र राजमार्गको मंत्री थिए। यसबाहेक, उनले गंगा सफाई मंत्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन् । गडकरीको कामको पछिल्लो सरकारमा सबै भन्दा बढी सराहना गरिएको थियो। गडकरी भाजपाको राष्ट्रीय अध्यक्ष पनि भईसकेका छन् । दोस्रो पटक उनि नागपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् र संघको नजिकका नेता मानिन्छ।
रविशंकर प्रसाद मोदी सरकारमा एक तेज तर्रार मंत्री का रूपमा परिचित छन् । यस प्रकार, रविशंकर प्रसाद यो समयमा पनि मंत्री बन्ने निश्चित छ। अघिल्लो सरकारमा, उनलाई कानून मंत्रीको जिम्मेवारी थियो। यसबाहेक, सरकारको प्रवक्ताको रूपमा बोल्दै आएका छन ।
रक्षा मंत्री निर्मल सीतारमण एक पटक फेरि कैबिनेटमा संलग्न हुनेछिन । बिहीवार निर्मल सीतारमणले पनि प्रधानमन्त्रीका साथमा शपथ लिन सक्छिन ।
केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृती ईरानीले अमेठी लोकसभा सीटबाट कांग्रेसका राहुल गांधीलाई पराजित गरेकी थिईन र एक पटक फेरि आफैं कैबिनेटमा आफ्नो स्थान पक्का गरेकी छिन् । यस्तो मानिन्छ कि फेरि स्मृत्ति ईरानीले मोदी कैबिनेटमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सक्छिन।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावाडेकरलाई फेरि पनि कैबिनेटमा समावेश गर्न सकिन्छ। उनलाई अघिल्लो मोदी सरकारमा मानव संसाधन मंत्रालयको जिम्मेवारी थियो । यसबाहेक, उनले राजस्थानको प्रभारीको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनको नेतृत्वमा बीजेपीले राज्यको सबै सीटहरु हासिल गर्न सफल भएको थियो ।